သဘာဝ – Page2– The Only Way To Go!
The WordPress.com stats helper monkeys prepareda2013 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 10,000 times in 2013. If it wereaconcert at Sydney Opera House, it would take about4sold-out performances for that many … More 2013 in review
စိတ်ကို တည်လိုက်သည် ။ ခါးကို အနည်းငယ် ဆန့်လိုက်သည် ။ အသက်ရှူချက်တွေကို စိတ်မျက်စိဖြင့် စိုက်ကြည့်လိုက်သည် ။ အမှုမဲ့ ရှူနေတဲ့ လေအဝင်အထွက်က ထင်းကနဲ ရှင်းနေသည် ။ သူသည် ဝင်ထွက်ခြင်းဖြင့် စည်းချက် ညီနေသည် ။ ပင်ကိုယ်စိတ်က သူ့ခြေလှမ်းတွေကို လိုက်ကြည့်ရတာ မောနေသည် ။ လိုက်၍ပင် မမှီ ။ သို့သော် သူသည် သူ့အလုပ်သူလုပ်နေသည်သာ ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ စောင့်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်သည် တကယ်မောပေသည်။ အားအနည်းငယ်စိုက်၍ သူ့ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်း ရှင်းလာသည် ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ငြိမ်သက်လာသည် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း သတိမထားမိလေတော့ ပြီ။ သူ့ခြေလှမ်းတွေကို ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ထားသည် ။ မှီသည်လည်း ရှိသည် … More သံဝေဂ (၂)
Leaveacomment သံဝေဂ (၂)
ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ အထင်ဖြင့် လျှောက်ခဲ့တဲ့ခရီးများသည် ပန်းတိုင်အရောက်မှာ စိတ်မော လူမောဖြင့်သာ လမ်းလွဲခဲ့လေခြင်းလို့ တစ်ကိုယ်တည်း ညည်းခဲ့ကြသည်သာ ကျန်ခဲ့လေသည် ။ မနက်မော ၊ ညမော ၊ တနေ့လုံး မောနေရခြင်းတွေသည်ပင် အရောင်ပြောင်းလဲထားသော သင်္ခါရ ဓမ္မတွေဟု မမြင်သ၍ မောပြီးရင်း မောနေပါဦးမည် ။ သစ္စာဉာဏ်ဟုခေါ်သော အမှန်အတိုင်း မြင်တဲ့ အသိဉာဏ်ကလေးတစ်ခု မိမိအဇ္ဇျှတ္တမှာ မတည်သေးသ၍လည်း ငြိမ်းချမ်းခြင်းသို့ သွားသောလမ်းသည် ရောက်မလိုလိုနဲ့ ခရီးထောက်နေပါလိမ့်မည် ။ မနက်ဖန်သည် နောက်တစ်နေ့မို့ အချိန်အပို်င်းအခြားကား လိုသေးသည်။ သေခြင်းတရားသည် ဒီဘဝအတွက် နှစ်ခါမထပ်တာမို့ သတိထားဖို့လည်း လိုပေသည် ။ အသိဉာဏ်ရှိသော လူတစ်ယောက်အတွက် မိမိရဲ့အရေးပါဆုံး အကောင်းဆုံး အရာ ဘာဆိုတာ သူ့အသိနဲ့သူ သိနေပါလိမ့်မည် ။ … More သံဝေဂ (၁)
Leaveacomment သံဝေဂ (၁)
ဘာသာတရားဟာ ဘာအတွက်လဲ .. ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်သူ ရှိသလို ၊ ဘာသာတရားကို မကိုးကွယ်သူလည်း ရှိပါတယ် ။ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်သူတွေမှာ ဘာအတွက်ကြောင့် ကိုးကွယ်ကြတာပါလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်မိတယ် .. ။ လူတစ်ချို့မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းကစပြီး အဖေနဲ့ အမေက ဒါလုပ်၊ ဒါကိုးကွယ် ဆိုလို့ ကိုးကွယ်မှုကို ယူခဲ့ကြတယ် ။ လူတစ်ချို့မှာ ဟာ .. ဒါ ဟာ ၊ ဒီဘာသာဟာ လူအများ ကိုးကွယ်လို့ ငါလည်း ကိုးကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ အများကြိုက် ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ကိုးကွယ်တာလည်းရှိတယ် ။ လူတစ်ချို့မှာလည်း မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အကောင်းအဆိုး အပြစ်တွေအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အားကိုးရာ ရှာတဲ့အနေနဲ့ ဘာသာတရား တစ်ခုခုကို ကိုးကွယ်လိုက်တဲ့ သူတွေလည်း … More ဘာသာတရားဟာ ဘာအတွက်ပါလဲ
4 Comments ဘာသာတရားဟာ ဘာအတွက်ပါလဲ
ကျွန်နော့်မှာ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ရှိတယ် .. ။ သန်းကိုရယ် ဖိုးခင်ရယ် ကျွန်တော်ရယ်ပေါ့ .. ငယ်ငယ်က အဲ့ဒီ .. ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်လုံး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြတယ် .. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မိန်းမ ရသွားတယ် သူ့မှာ ကလေးတွေနဲ့ … သုံးယောက်ရှိတယ် မိန်းမရောပေါ့ .. ကျန်တဲ့ နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ကျနော်နဲ့ တခြား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သန်းကိုလို့ခေါ်တဲ့ နှစ်ယောက်မှာတော့ .. အိမ်ထောင်မရှိကြဘူး .. ။ ဖိုးခင်ဆိုတဲ့ သူကတော့ သူ့ မိသားစု အရေးနဲ့ လုံးပန်းရတာမို့ ကျနော်တို့နဲ့ ရံဖန်ရံခါပဲ တွဲလေ့ရှိတယ် .. ။ ဖိုးခင်နဲ့ … သန်းကိုတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ … More မပြည့်သော အိုးတစ်လုံး
2 Comments မပြည့်သော အိုးတစ်လုံး